कोही छ मलाइ बिहे गर्ने ? अब त मलाई पनि विवाहको रहर जागिसक्यो नी… – Namaste Host
February 19, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on कोही छ मलाइ बिहे गर्ने ? अब त मलाई पनि विवाहको रहर जागिसक्यो नी…
चर्चित गायिका ज्योति मगरलाई नचिन्ने सायद थोरै नै होलान । यतिबेला कोरोइना भाईरस हुदैन थ्यो भने उनी यतिबेला बिभिन्न स्टेज कार्यक्रममा समय दिन भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो ।
गायिका ज्योति मगर पछिल्लो समय डान्सिङ विथ दि स्टार्स नेपाल’का कारणले चर्चामा छिन् । उक्त शोमा उत्कृष्ट ५ भित्र पुगेर हालै बाहिरिएकी छन् । शोमा विभिन्न शैलीका नृत्य प्रस्तुत गरेको कारण चर्चाको केन्द्रमा रहेकी उनले शोमार्फत् आफुलाई
बहुमुखी प्रतिभाकी धनीको रुपमा समेत आफू चिनाउन सफल भएकी छन् । उनले सुरुमाती चरणमा माया मारेर बोलको लोकदोहोरी गीतमा अभिनय गरेपछि ज्योति
बहुप्रतिभाकी धनी भनेर आम दर्शकहरुको मन जितेकी थिईन । लोकगायिकाको रुपमा चर्चित उनी म्युजिक भिडियो अभिनय तथा स्टेज पर्फमेन्समा बोल्ड अवतारको कारण पनि चर्चामा हुन्थिन् ।
त्यसैले त डान्सिङ विथ दि स्टार्स नेपाल उनी आफ्नो छवि परिवर्तन गर्न मात्र शोमा उनी सहभागी भएको आरोप पनि लाग्यो । उनी भने आफुमा रहेको बहुमुखी प्रतिभा प्रस्तुत गर्न शोमा सहभागी भएको बताउँछिन् ।
शोबाट बाहिरिएपछि नयाँ गीतसंगीतको तयारीमा रहेकी गायिका मगरलाई फ्यानले विवाह कहिले हेर्न पाउने छन भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिएकी छिन अब त मलाई पनि विवाहको रहर जागिसक्यो ।
मंसिरको महिना फेसबुक लगायत जताततै विवाह देख्दा मलाई धेरै रहर लागेको छ । मन मिल्दो राम्रो बर पाएँभने जुनै समय पनि हुनसक्छ विवाह । भनेको जस्तो बर पाइनँ भने कहिलै पनि नहुन पनि सक्छ भनेर रमाईलो जवाफ
दिएकी छिन । चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका तथा मोडल ज्योति मगरले काठमाडौंमा भव्य घर बनाएकी छिन्। कलाकारिता बाटै उनले काठमाडौंमा घर बनाएको कुरा पहिले नै बताएकी थिइन् ।
कोसरोना महामारी शुरु भन्दा पहिले नै बनाइसकेको घरमा हाल उनी बस्दै आएकी छिन् । विकट गाउँ रोल्पामा जन्मेर काठमाडौंमा संघर्ष गर्दै आफूले घर बनाएको कुरामा उनी गौरव गर्छिन् ।
दशकभन्दा लामो समयदेखि कलाकारीतामा सक्रिय उनले नाम र दाम दुवै कमाएकी छन् । पछिल्लो समयमा उनले आफ्ना गीतहरुमा केही परिवर्तनहरू देखाउन थालेको देख्न सकिन्छ ।
शुरुवातमा उत्ताउला र उच्छृंखल हुने गीतहरू अहिले अलिकति सुधार भएको हुन सक्ने धेरैको बुझाई रहेको छ। उनको घरमा उनका दिदीका छोरा पनि बस्दै आएका छन् ।
उनीसँग आफ्नै लग्जरी कारपनि छ । उनको शौखिन जीवनशैली निक्कै लोभलाग्दो छ । अरु कालाकारको अवस्था हेर्दा र ज्योतिलाई नियाल्दा उनले आकाश पाताल हुनेगरी आर्थिक रुपमा सम्पन्नता ल्याएकी छिन् ।
गित सँगितबाटै लाखौं रकम कमाईसकेकी छिन ज्योतीले । उनको बसाई अहिले काठमान्डौमै रहेको छ । उनको खास जन्म घर भने रोल्पा जिल्लामा पर्दछ । चोथाले डट कम
यी तीन राशी भएका व्यक्ति हुन्छन् निकै शक्तिशाली, जति पीडा भएपनि देखाउँदैनन् बाहिर